Cumar: Kaptan mariinees oo noqday harqaanle - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Cumar Maxamed Cabdalla Sayidii oo horay uga tir-sanaan jiray ciidankii badda ee Soomaaliya. sawir: Kenadid Mohamed/SR
Cumar: Kaptan mariinees oo noqday harqaanle
La daabacay onsdag 30 maj 2018 kl 13.51
Soomaalidii hore way ka wanaagsanayd soomaalida iminka joogta. Ciidankii hore ee Soomaaliyeed waxey ahaayeen kuwo ka dhisan dhan walba, xag tababar, xag hoggaan iyo kala dambeeyn intaba, sida uu sheegay Cumar Maxamed Cabdalla oo muddo 15 sannadood ah ku howl-galayay ciidankii mariineeska ama badda ee Soomaaliya. Halkaasina oo uu ka gaarey darajada kabtanka.
Waa intii aannu dhicin dagaalkii sokeeye. Hase yeeshee maanta ku shaqeeysta xirfadda harqaanle:
Cumar Sayidii oo xasuustiisa dib ugu laabtay ayaa soo tiriyey dhammaan madaxdii isaga dambeeysay ciidanka badda Soomaaliya muddadii uu ka howl-galaayay.
Cumar Sayidii wuxuu dagaalkii sokeeye ugu dhacay isaga oo gudanaaya howshiisii qaran ee uu ka hayay ciidanka badda Soomaaliya.
Kolkii uu soo gaaray magaalada Malmö isaga iyo qooyskiisa ayuu Cumar Maxamed Cabdalla wuxuu sameeyey waxa lagu magacaabo spårbyte – inuu bedelo xirfaddii ciidanka una wareego shaqada harqaanka. Wuxuu ka howl bilaabay "ururka Hidde iyo Dhaqan" oo ka aasaasn magaalada Malmö.
Cumar Sayidii ayaa sheegay inay xirfaddani tahay mid uu aad ugu dheereeyo, isla-markaana uu awoodo inuu wax walba oo tolliin la xiriira qaban karo.
Cumar Maxamed Cabdalla ayaa sidoo kale ku howlan mashruuc loogu magac daray “tjejer kan – habluhu way awoodaan” oo uu hablo soomaaliyeed ku siiyo tababar dhanka tolliinka dharka. Kuwaasina oo taagan heerar kala duwan, sida uu sheegay mar uu warramayay laanta afka soomaaliga ee idaacadda Raadiyaha Sweden: